Tiro yar oo u soo baxday codaynta doorashadii Kenya - Wargane News
Somaliland: Warbaahinta Kenya Oo Warbixin Ka Qortay Caqabaddaha Soo Waajahay Qorshii…
Somaliland: Xildhibaan Jire Oo Xukuumadda Ka Dalbaday Inay Mugdiga Ka Saarta…
Somaliland: Siyaasi Cabdikariin Axmed Mooge Shacbiga Kula Taliyay Ururada la Furayaa…
Deg Deg: Dagaal Saaka Dhex-maray Ciidammada Somaliland Iyo Kuwa Puntland Oo…
Home World News in Somali Tiro yar oo u soo baxday codaynta doorashadii Kenya
Tiro yar oo u soo baxday codaynta doorashadii Kenya
Madaxa guddiga doorashada ee Kenya ayaa sheegay in 33% dadka u diiwaan gashan inay codkooda dhiibtaan oo kaliya ay u soo baxeen inay codeeyaan isku celiska ahayd ee doorashadii shalay dhacday.
Tani ayaa ah hoos u dhac weyn, oo 80% in ku dhow ka yar tirada dadkii u soo baxay doorashadii dhacday Agoosto.
Waxay daba socotaa baaqii hogaamiyaha mucaaradka, Raila Odinga, ee ahaa in la qaaddaco doorashada.
4 goobood ayaa dib loo dhigay doorashadii ka dhici lahayd, kuwaasoo ay rabshado ka dheceen.
Laba qof ayaa iyagana la sheegay in ay ku dhinteen rabshado ka dhacay dalka.
Tirinta codadka ayaa iminka socota, lamana filayo in natiijada kama dambaysta ah lagu dhawaaqo wixii ka horreeya 29ka Oktoobar.
Wiil dhalinyaro ah ayaa waxaa toogtay booliiska, isagoo goor dambe dhintay, kaddib markii ay isku dhacyo ka dhaceen magaalada uu mucaaradku ku xooggan yahay ee Kisumu, oo ah mid ka mid ah deegaannada afarta ah ee qalalaasuhu uu saameeyay.
Madxaweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii August, balse mar kale ayaa doorashada lagu celiyay sababo la xiriira inaysan si sax ah u dhicin.
Madxaweyne Kenyatta ayaa doonaya in mar labaad la doorto. Hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharraxnimadiisii madaxtinnimada.
Gudoomiyaha guddiga doorashada Wafula Chebukati ayaa horay u sii sheegay in xorumaha coddayntu ay furmi doonaan 6:00 subaxnimo, ka dib markii ay xukuumadu damaanad qaad siisay.
Tobannaan kun oo booliis ah iyo xubnaha kale ee laamaha ammaanka ayaa loo daad gureeyay goobaha cod bixinta si ay u sugaan ammaanka goobaha laga codaynayo iyo xarrumaha codka laga dhiibanayo.
Beesha caalamka maxay ka tiri doorashada Kenya?
Doorashada Kenya : Maxaa keeney in “ninkii cambuulada” uu qabsado baraha bulshada?
Kenyatta oo dadka ugu baaqaya in ay codeeyaan ayaa sheegay in awawyadood ay u soo dagaalameen una dhinteen xaqa in dadka Afrikaanka ah ay codkooda dhiibtaan. Waa in aynaan ku dhiiranin diiditaanka dhaxalkaas ayuuna sii raaciyay.
Ku dhawaaqitaanka natiijadii doorashadii 8 Agoosto ee uu ku guulaystay Uhuru ayaa horseeday in la dhaliilo Guddiga Doorashooyinka ee Kenya.
Todobaadkii hore xubin sare oo Guddiga Doorashada ee Kenya ka tirsan ayaa u carartay Maraykanka ka dib markii ay la kulantay hanjabaad.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in booliisku ay xabbado cirka u rideen si ay u kala cayriyaan taageerayaasha mucaaradka ee magaalada galbeedka dalka ku taalla ee Kisumu iyo deegaanka Kibera ee Nairobi. Sunta dadka ka ilmeysiisa ayay booliisku sidoo kale adeegsadeen.
Maxaa khaldamay August?
Image captionMadaxweyne Uhuru Kenyatta, oo sawir la galaya cod-bixiye
Maxkamadda ugu sarreysa Kenya ayaa qaadatay go`aa naan caadi ahayn oo ay ku qaaddacday doorashadii madaxtinnimo ee August waxayna bishii September codsatay in doorasho ku celis ah la qabto iyadoo sabab uga dhigtay in aan si sax ah loo qaban.
Xaakimka sare David Maraga ayaa sheegay in doorashada aanan loo qaban si dastuurka waafaqsam wuxuuna ku dhawaaqay inay tahay mid aan jirin.
Wuxuu xusay in baaritaanka maxkamadda oo ay taageereen afar ka tirsan xaakimiinta lixda ah lagu helay in guddoga doorashooyinka IECB aysan si sax ah u maamulin gudbinta natiijada.
Maxkamadda ayaa sheegtay in natiijada aysan ahayn mid cad oo la xaqiijin karo.
Muxuu mucaaradku u qaaddacay doorashada ku celiska ah?
Raila Odinga ayaa sheegay in IEBC ay ku guul-darreysatay inay sameyso isbeddello si looga hortago in lagu celiyo khaladkii hore, inkasta oo ay IEBC khilaaftay hadalkan.
Isbahaysigiisa mucaaradka – (Nasa) – ayaa sheegay inaysan ka qaybgaleyn doorashada ilaa isbeddello la sameeyo.
Image captionRaila Odinga ayaa taageerayaashiisa u sheegay : “Waan ku guuleysan doonnaa dagaalka”
Odinga ayaa wacad ku maray inuu carqaladeyn doono codbixinta maanta dhacaysa, isagoo ku baaqay dibadbaxyo ballaaran, balse wuxuu ka codsaday taageerayaashiisa inay ka fogaadaan goobaha codbixinta si uusan isku dhac u dhicin.
Horraantii bishan ayaa wuxuu ku eedeeyay dowladda keligii-talisnimo, isagoo sheegay inay ku guuleysna doonaan doorasho xor iyo caddaalad ah.
Somaliland, climate change is now a life-or-death challenge
Antonio Conte oo ku qasban inuu raali galin ka bixiyo qaabkii uu fariinta ugu diray Diego Costa
Somaliland: KULMIYE Oo Magacaabay Maamulka Qaar Ka Mid Ah Degmooyinka Gobolka Maroodi-Jeex Ee Xisbigaas
Somaliland: Khilaafkii Xisbiga UCID Oo Mar Kale Dib U Bilaabmay Iyo Hadalada Ay Masuuliyiinta Xisbiga UCID Isdhaafsadeen
Booliska Hindiya Oo Lagu Wargaliyey In Shaqada Laga Eryidoono Askariga Baruurta Iska Ridi waaya